संयुक्त राज्य अमेरिका क्यासिनो
Sloto नगद क्यासिनो 100ADDEDSPINS स्लोटो नगद जम्मा $ 25 माथि 100 नि: शुल्क स्पिन पाउनुहोस्! 100x कैशबल
Sloto नगद क्यासिनो 2019BONUS-1
2019BONUS-2 शून्य सुरु गर्नुहोस् 2019 र बोनस र स्लोटो नगद क्यासिनोमा नि: शुल्क नगद! $ 500 अधिकतम नकदआउट
Sloto नगद क्यासिनो 100WKNDWISHES 100 WEEKEND SPINS - Sloto Cash 80x कैशबल
Sloto नगद क्यासिनो FREESPINSREVENGE $ 300 + 100 माथिमा Spins! - स्लोटो नगद 70x कैशबल
Sloto नगद क्यासिनो 400GHOSTS 400% मिलान + 100 स्लाटो नगदमा माथिको भूत जहाज स्पिन 100x कैशबल
Sloto नगद क्यासिनो 100ADDEDSPEENS स्लोटो नगद जम्मा $ 25 माथि 100 नि: शुल्क स्पिन पाउनुहोस्! 50x कैशबल
Sloto नगद क्यासिनो TBFCL100 स्लोटो नगद क्यासिनोमा 100 फ्री स्पिन 40X Wager
Sloto नगद क्यासिनो 777FREE300 $ 7,777 + 300 फ्री स्पिन - स्लोटो नगद 100x कैशबल
Sloto नगद क्यासिनो 200WITCHWIN $ 25 + जम्मा गर्नुहोस् र 200 थपिएको स्पिन प्राप्त गर्नुहोस्! - स्लोटो नगद 70x कैशबल
Sloto नगद क्यासिनो SEPTGROOVE 50 सेप्टेम्बर निष्ठा स्लोटो नगदमा Spins 90x कैशबल
Sloto नगद क्यासिनो 100AND100 120 निशुल्क स्पिन + $ 120 नि: शुल्क पैसा स्लोटो नगद 50x कैशबल
Sloto नगद क्यासिनो 100FREE आसान जीत! $ 20 जम्मा गर्नुहोस् र स्लोटो कैश कैसीनोमा $ 100 निःशुल्क पाउनुहोस् 100x कैशबल
Sloto नगद क्यासिनो SLOTO1MATCH 200% मिलान + 100 Gemtopia माथि मा Spins! - स्लोटो नगद 100x कैशबल
Sloto नगद क्यासिनो WINTERSPINS1 १००% + F० एफएस र १ %०% + १०० स्पिन स्लोटो क्याश २ शीतकालीन बोनस। Winter 100० जाडो किक-अफ फ्रीस्पेन्स प्याक! 80x कैशबल
Sloto नगद क्यासिनो विकिङ्क्सएनमक्स 1st: 100% माथि 300 र 80 सम्म Vikings स्लॉट मा स्लोटो नगद मा फैलिएको छ 75x कैशबल
Sloto नगद क्यासिनो FREE100EXPEDITION तपाईंको $ 100 नि: शुल्क टिकट पाउनुहोस्! - स्लोटो नगद 90x कैशबल
Sloto नगद क्यासिनो BDAY25 स्लोटो कैश कैसीनो मा 25 उत्सव स्पिन। यूएसए स्वागत छ! 50x कैशबल
Sloto नगद क्यासिनो 4000BONUS $ 4,000 बोनस / 400% कैसीनो बोनस मा स्लोटो कैश 100x कैशबल
Sloto नगद क्यासिनो SLOTOMEMBER $ 50 वीआईपी टोकेन - स्लोटो नगद 90x कैशबल
यो ENCHANTED बगैचा द्वितीय? ️?
यो उच्च प्रशंसित स्लट जादूगर बगैचा को उत्तरक्रम हो। एन्मेन्टेड गार्डन II एक २--लाइन भिडियो स्लट हो कि उच्च अस्थिरतासँग। एन्मेन्टेड गार्डेन २ स्लट मेसिन राम्ररी तीखो ग्राफिक्स र आकर्षक एनिमेसनको साथ बनाईएको छ, काल्पनिक ज in्गलमा सेट गरिएको छ, जिनोम, परियों र जादुई घण्टीहरू सहित। संगीत मंत्रमुग्ध भैरहेको छ र तपाईंसँग रेलमा नयाँ नयाँ प्रतीक छन्। दुई विशेषता प्रस्तुत गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिका क्यासिनो बोनस सुविधाहरू जुन प्रशस्त निःशुल्क खेलहरू दिन्छन्। यस प्राइम स्लटको अपूरणीय सुविधाहरू हेरौं:
उपन्यास: परी राजकुमारी फेरि एक जंगली छ र रिल्स 2, 3,4र5मा देखिन्छ। जब एक विजय संयोजनमा देखा पर्दछ सबै पुरस्कार दुबै हुन्छन्।
स्कैटर: यो प्रतीक सबै रिलेहरूमा देखिन्छ। तिनीहरू तिर्न भुक्तानी-भुक्तानीमा देखा पर्दैन। अधिकतम2पुरस्कार (एक्स ट्रिगर शर्त) सँग एक पुरस्कार प्राप्त गर्न ल्याण्ड न्यूनतम 500 यदि तपाईं एक स्पिनमा5पाउनुभयो भने
निःशुल्क खेल: त्यहाँ दुई नि: शुल्क खेल राउन्डहरू छन्। सुविधा ट्रिगर गर्न तपाईंले रिल १ मा बगैंचा प्रतीक र रिल on मा एक परी राजकुमारी अवतरण गर्नुपर्दछ। तपाईं आफ्नो नि: शुल्क खेल प्रकट गर्न फेरी प्रतीकमा क्लिक गर्नुहुन्छ।
फायरफली सुविधा: तपाईंले Free नि: शुल्क खेलहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ जहाँ गेनोम, फेयरी र गार्डन प्रतीकहरू एक सानो फायरफ्लाइ प्रतीक तिनीहरूलाई सम्मिलित छ। यदि तपाईं एक वा स्पिनमा तीन वा बढी फायरफ्लाइहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ भने, तपाईं ट्रिगर गर्ने प्रतीकहरूको प्रत्येकको लागि7थप निःशुल्क खेलहरू पाउनुहुनेछ। यसले धेरै आकर्षक बनाउँदछ किनकि नि: शुल्क खेलहरू अनिश्चित कालका लागि जारी रहन सक्छ। सबै पुरस्कारहरू फ्री गेमहरूमा तीन गुणा हुन्छन्
परी रानी सुविधा: तपाईं १० नि: शुल्क खेलहरूको साथ सुरू गर्नुहुन्छ, रिल २,,, and र on मा थप परी राजकुमारी प्रतीकहरू! फायरफ्लाइ फिचरमा जस्तै, परी, नोम र गार्डनको पृष्ठभूमिमा फायरफ्लाइ छ। Or वा अधिक फायरफ्लाइ स्पिनमा, प्रति प्रतीक extra थप नि: शुल्क खेलहरू प्रदान गर्नुहोस्। यस सुविधाको अतिरिक्त वाइल्ड्सको साथ तपाईं नि: शुल्क खेलहरूको ठूलो मात्रामा समाप्त हुनेछ। सबै पुरस्कारहरू यस सुविधाको अवधिमा तीन गुणा हुन्छन्!
स्थानीय प्रगतिशील खपत: यो एक अनियमित ज्याकपट हो जुन कुनै स्पिनको समापनमा जित्न सकिन्छ, कुनै विशेष संयोजन आवश्यक छैन! एन्चेन्टेड गार्डेन २ स्लोटो'का नगद बढेको खेलहरूको संग्रहमा ठोस थप हो। एक पुरस्कृत अनलाइन गेमि experience अनुभवको लागि यस आकर्षक खेल वर्षको मजा लिनुहोस्।
$ 25- $ 49 15 नि: शुल्क Spins माथि!
$ 50- $ 99 25 नि: शुल्क Spins माथि!
$ 100- $ 199 50 नि: शुल्क Spins माथि!
$ 200- $ 299 75 नि: शुल्क Spins माथि!
$ 300 + 100 नि: शुल्क Spins माथि!
कोड रिडिम गर्नुहोस्: ENCHANTEDSPINS स्पिन खेल: एन्शेन्टेड बगैंचा सर्तहरू: स्पिन winnings होल्ड 10x playthrough र अधिकतम अधिकतम नगदआउट। प्रति महिना 2x प्रति दिन उद्धार गर्नुहोस्!
संयुक्त राज्य अमेरिका क्यासिनो बोनस सुविधाहरू प्रेमीहरूका लागि: FUCANGLONG ?!
हामी एशियाई स्लटको प्रशंसक हौं र फुकang्गलाong्ग एक चिनियाँ मिथक थिमको साथ एक महाकाव्य स्लट हो। Fucanglong चिनियाँ लोक कथा मा पौराणिक खजाना ड्र्यागन छ र यो असीम भाग्य को प्रतीक हो। यसलाई फ्यूस्या treas्लongको रिलमा लुकेका भण्डारहरू, बोनसहरू र निःशुल्क स्पिनहरू फेला पार्न तपाईंको मिशन बनाउनुहोस् र यसलाई एकसँग खेल्नुहोस् 225% मिलान + 50 TWICE दैनिक!
युएसए क्यासिनो बोनस सुविधाहरू प्रेमीहरू चकित हुनेछन् कति विशेष यूएसए क्यासिनो बोनस सुविधाहरू यस खेलमा छन् फ्यूकाang्लong्ग एक सबै तरिका भुक्तानी स्लट हो ताकि तपाइँले पे-लाइनमा प्रतीकहरू पंक्तिबद्ध गर्नुपर्दैन। यसको सट्टामा, तपाईले प्रतीकहरू क्रमश: क्रमशः क्रमशः क्रमशः बायाँबाट दायाँ प्राप्त गर्नुपर्दछ, जहाँ तिनीहरू रीलहरूमा देखा पर्दछन्। यहाँ छन् Fucanglong मा प्रभावशाली क्यासिनो बोनस सुविधाहरू:
WILD DRAGON: रिल्स 2, 3,4र5मा देखा पर्दछ र स्क्याटरहरू बाहेक सबै प्रतीकहरू प्रतिस्थापन गर्दछ। यो खेल्दा तपाईंको यो राम्रो मित्र हुनेछ।
दुई स्क्याटरहरू: ड्र्यागन पर्ल र ड्र्यागन माउन्टेन यस खेलमा दुई स्क्याटरहरू हुन्। प्रत्येक एक फरक यूएसए क्यासिनो बोनस सुविधा ट्रिगर गर्न सक्दछ (तल हेर्नुहोस्)।
ड्रगुन माउन्टटेन फीचर: यो सुविधा ट्रिगर गर्न तीन वा अधिक ड्र्यागन माउन्टेन स्क्याटरहरू पाउनुहोस्। F नि: शुल्क खेलहरू प्राप्त गर्नुहोस्। पुन: ट्रिगरहरू सम्भव छन्, extra थप नि: शुल्क गेमसन्ड थपेर भुक्तान गुणक १ बढाउँदै वाईल्ड ड्र्यागन यस सुविधामा विस्तार हुनेछ यदि or वा scat स्क्याटरहरूले फ्री गेमहरू सुरु गरे भने।
ड्रोजन पीडा विशेषता: यो सुविधा ट्रिगर गर्न तीन वा अधिक ड्र्यागन पर्ल स्क्याटरहरू पाउनुहोस्। F नि: शुल्क खेलहरू पाउनुहोस्। नि: शुल्क खेलहरूको समापनमा, एक मोतीले 8x बाट x 3x तपाईंको ट्रिगर शर्तमा एक जीत प्रकट गर्दछ। यदि नि: शुल्क खेलहरुबाट तपाइँको जीत मोती संख्यामा पुगेको छैन भने Fucanglong सुविधा ट्रिगर भयो!
FUCANGLONG विशेषता: तपाईं पर्ल मूल्य पार गर्न सक्नुहुन्न सम्म तपाईं थप नि: शुल्क खेलहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। प्रत्येक अतिरिक्त फ्रि स्पिन पछि, पर्लको मूल्य १ देखि x गुणा तपाईंको ट्रिगर शर्तमा वृद्धि हुनेछ, सम्भवतः तपाईंको ट्रिगर शर्त 1 8x सम्म बढ्नेछ! यस सुविधाको बखत वाइल्ड ड्र्यागन विस्तार हुनेछ पूरै रिलमा कभर गर्न! यदि तपाईं बोनस-प्याक स्लटहरू चाहानुहुन्छ, भने फ्यूकाangलाong तपाईंको शीर्ष मनपर्ने सूचीमा हुनु पर्छ। उत्कृष्ट एम्बियन्ट संगीत, ठोस ग्राफिक्स र घाता !्खल जीतहरू - यो सबै तरिका भुक्तानी स्लट तपाईंको मनपर्ने बन्ने निश्चित छ!
$ 25- $ 49 75% मिलान + 15 स्पिन
$ 50- $ 99 100% मिलान + 20 स्पिन
$ 100- $ 149 125% मिलान + 25 स्पिन
$ 150- $ 199 150% मिलान + 30 स्पिन
$ 200- $ 249 175% मिलान + 35 स्पिन
$ 300 + 225% मिलान + 50 स्पिन
कोड रिडिम गर्नुहोस्: ALLWAYSPAYS Spins खेल: Fucanglong USA क्यासिनो बोनस सर्तहरू: दिनभर मा उपलब्ध 2x दिन भर मा। यो 30x स्लट होल्ड गर्दछ केने खेलकुद र MAX MAXASHASH!
ईश्वरको नि: शुल्क दान देवताहरू!
यो थोपा भाग्यको साथ र रिलिजमा एकदमै धेरै रोमाञ्चक समयका लागी, तपाईले मात्र इमेजिन इन्टर्न गर्न र नि: शुल्क स्पिन ईश्वरहरूलाई स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ!
श्री स्लोटोले सुनिश्चित गर्न चाहन्छ कि तपाइँ आफ्नो खाता भरेर निःशुल्क स्पिन ईश्वरहरू र दुईवटा शानदार बोनसहरू र 350 अतिरिक्त स्पिनहरू जुन जून 25 सम्म सम्म $ 15 सम्मको रूपमा डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। 100% म्याचको साथमा उपहारको इनाममा आइपुग्छ इजरायलमा पुग्न को लागी तपाईंको क्वेस्टको जरुरी छ। प्लस एक्सन्यूम फ्री स्पिनले विदेशी प्रचलित खजाना स्लॉटमा। जब तपाईं 50% यूएसए कैसीनो बोनस प्लस 150 को धन को सर्वशक्तिमान ईश्वर मा खेलिन्छ तब सम्म रंगों को रंगों को नजदीक दिखेगा। र तपाईं भाग्यशाली बहु-रंगको जीत र 100 नि: शुल्क क्याई हांग Spins संग आफ्नो गन्तव्य पुग्नुहुनेछ!
विदेशी प्रचुर मात्रामा खजाना स्लट खेल्न सुरु गर्नुहोस् 100% मिलान अमेरिका क्यासिनो बोनस + 50 नि: शुल्क स्पिनहरूमा!
कोड रिडिम गर्नुहोस्: बून्टास्पिन-1 धनको साथमा सर्वोच्च परमेश्वरलाई भेट्नुहोस् 150% मिलान + 100 शीर्ष मा Spins!
कोड रिडिम गर्नुहोस्: बून्टास्पिन-2 अन्ततः आफैलाई इन्द्रधनुषको भाग्य अनुभव गर्नुहोस्! दाई हाँगमा 200 नि: शुल्क स्पिन दावी गर्नुहोस् छुटकारा
कोड: 200FREESPINSGOD सर्तहरू: निक्षेप बोनसलाई $ 30 न्यूनतम जम्मा आवश्यक हुन्छ र तिनीहरू 30०x स्लट वा केनो रोल ओभर राख्छन् र अधिकतम क्यासआउट हुँदैन। नि: शुल्क कूपन जीत $ 500 अधिकतम कैशआउट होल्ड। प्रोमो कोड क्रममा रिडिम हुन अनिवार्य छ। प्रस्ताव जून १ 15 मा समाप्त हुन्छ।
यस जूनमा स्लोटोको उच्चतम यूएसए क्यासिनो बोनस पोइन्टमा पुग्नुहोस्!
संसारको सबैभन्दा लामो पर्वत शायद तपाईंको पहुँचबाट बाहिर हुन्छ जब सम्म तपाइँ माउन्टटेनरिंग अनुभव र हजारौं डलर छोड्न नसक्ने हुन्छ। तथापि, तपाईं जून एक्सट्स्टिस मनाउन सक्नुहुन्छ जब तपाइँ $ 25 लाई जमा गर्दा स्टोटो रिल्समा केही प्रभावकारी चोटहरू summiting गर्दै हुनुहुन्छ!
बर्षको सब भन्दा लामो दिनहरू स्वागत छ र १११% १ खेल बोनसको साथ जीतको लागि तपाईंको मार्गमा चढ्नुहोस्। २११% दोस्रो म्याच बोनसको साथ शीर्षमा तपाईंको बाटो बनाउँदै जून उत्कृष्ट बनाउँदै जारी राख्नुहोस्। अन्त्यमा, उच्चतम बिन्दुलाई एकको साथ विजय गर्नुहोस् $ 111 निःशुल्क उपहार!
जून लामो समयदेखि गर्मी र न्यानो रातको लागि छ जब तपाईं बोनस र जीतको उच्चतम चोटीमा पुग्नुहुन्छ! एक जीत को लागी आफ्नो बाटो चढाउनुहोस् 111% 1st म्याच बोनस कोड रिडिम गर्नुहोस्: SOLSTICE-1
माथिको बाटो बनाउनुहोस् 211% XNUM Xnd म्याच बोनस कोड रिडिम गर्नुहोस्: SOLSTICE-2 साथको उच्चतम पोइन्टलाई विजय गर्नुहोस् $ 111 निःशुल्क उपहार!
कोड रिडिम गर्नुहोस्: FREE111SOLSTICE सर्तहरू: बोनसहरू जम्मा $ 25 मिनेट आवश्यक छ। जम्मा गर्नुहोस् र तिनीहरूले 30x स्लॉट वा केनो प्लेथ्र र कुनै अधिकतम नकद नगद समात्न सक्छन्। $ 111 नि: शुल्क चिप $ 500 अधिकतम नगदआउट राख्छ। प्रोमो कोडहरू क्रमान्तरण गर्न सकिन्छ। जुन 30th मा सबै अफरहरु समाप्त हुन्छ!
स्वागत छ मे? भाग्यशाली धूप र जीत संग!
मई संग ब्लिमिंग जीत र भाग्यशाली सूर्य को सीजन आउँछ। हामी जान्दछौ तिमी केहि महिना पहिले र तपाइँको बीउ रोप्यौ, श्री स्लोटो तपाईं जीतहरू जित्न चाहनुहुन्छ! स्वागत छ टोन घण्टौं वाबहरू, दुई बोनस, नि: शुल्क स्पिनहरू र एक $ 100 उपहारको साथ!
जब तपाईं $ 30 लाई जम्मा गर्नुहुने विजेता शैलीमा मई लाई भन्नुहोस् जुन तपाईंलाई 150% 1ST यूएसएस कैसीनो बोनस + 25 मारिची स्पिन्स प्रदान गर्दछ। एक 200% 2nd मिलान संयुक्त राज्य कैसीनो बोनस + 25 मारिची स्पिन संग सूर्यको साथमा जारी राख्नुहोस् र एक $ 100 निःशुल्क उपहारको साथ स्याहार दिनहरूमा टोकरी माथि! गंभीर सूर्यशाइन र जित्ने समयहरू तपाईंको म्यानेजरको नेतृत्वमा छन् जब तपाईले $ 30 को रूपमा कम जम्मा गर्नुहुन्छ! महिनाको साथमा लिनुहोस् 150% 1ST यूएसएस कैसीनो बोनस + 25 मारिची स्पिन छुटकारा
कोड: लुक्किन्शाइन-एक्सएनएक्स सूरजको साथ जारी राख्नुहोस् 200% 2nd मिलान USA क्यासिनो बोनस + 25 मारिची स्पिन
कोड रिडिम गर्नुहोस्: लुक्किन्शाइन-एक्सएनएक्स पछि प्राप्त गर्नुहोस् $ 100 निःशुल्क उपहार! छुटकारा
कोड: 100SUNSHINE सर्तहरू: बोनसहरू जम्मा $ 30 मिनेट आवश्यक छ। जम्मा गर्नुहोस् र तिनीहरूले 30x स्लॉट वा केनो प्लेथ्रो + 5x स्प्यानहरू र कुनै अधिकतम नकदआउटमा राख्नुहोस्। स्पिन खेल: Mariachi 5। निशुल्क $ 100 नि: शुल्क चिप $ 500 अधिकतम नगदआउट राख्छ। प्रोमो कोडहरू क्रमान्तरण गर्न सकिन्छ। म्याद म्यानेज एनएनएक्सएक्समा म्याद समाप्त हुन्छ
ड्रीम टाइम टाइम यात्रा ⏳
समय यात्रा 20 को आकर्षण भएको छth शताब्दी। यस शताब्दी अघि, केही मानिसहरूले समय मार्फत यात्राको सम्भावनालाई विचार गरे। शुरुवात समाजहरू कहिलेकाहीं चित्रित सपना परिदृश्यहरू जहाँ तिनीहरू फर्केर आए सुनको उमेर, तर यो भर्खरको समयमा मात्र हो कि मानवताले यस विचारलाई केही वास्तविक विचार दिन्छ। यो सबै १ 1895। In मा प्रकाशित एचजी वेल्सले लेखेको 'द टाइम मशिन' नामको सानो पुस्तकबाट शुरू भयो। त्यसबेलादेखि धेरैको कल्पनाशक्ति समयको यात्राको मोह र अन्तर्विरोधको साथ अन्तर्निहित रहेको छ। लोकप्रिय संस्कृतिले क्लासिक चलचित्रहरूमा समय यात्रा चित्रण गरेको छ: भविष्यमा फर्क, Interstellar, र टर्मिनेटर। यो एक रमाईलो विषय हो, तर के समय यात्रा पनि सम्भव छ? आधुनिक विज्ञानका अनुसार यो सैद्धांतिक रूपमा सम्भव छ। आइन्स्टाइनको विशेष सापेक्षताको सिद्धान्तलाई धन्यवाद, हामीले पत्ता लगायौं कि द्रुत गतिशील वस्तुहरूले समय ढिलो अनुभव गर्दछन् - जुन कुरालाई समय बिभाजन भनेर चिनिन्छ। त्यसोभए प्रकाशको गतिको नजिक अन्तरिक्ष यानमा उडान गर्ने पासan्गरले २ 24 घण्टा मात्र यात्राको अनुभव गर्न सक्दछ, जबकि पृथ्वीमा धेरै वर्षका मानिसहरू अन्तरिक्ष यान फर्किनु अघि बितिसकेका हुन्छन्! अर्को सैद्धांतिक संभावना फॅब्रिक स्पेस-टाइमबाट वर्महोल सिर्जना गर्नु हो। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कामबाट लिइएको यो अर्को धारणा हो। सबै ठाउँ र समय अन्तरिक्ष-समय भनेर चिनिने कुरासँग जोडिएको हुनाले, वर्महोलको माध्यमबाट यात्राको अर्थ भनेको विगतमा वा भविष्यमा पूर्ण भिन्न आकाशगंगामा अन्त हुन सक्छ। तपाइँ समय यात्रा को बारे मा सोच्न उत्साहित हुन्छ? हाम्रो नयाँ खेल क्युबे (विपरित पृष्ठ) को प्रयास किन नगर्नुहोस् जसको मुख्य विषयवस्तु इतिहासमा विभिन्न युगहरूमा यात्रा गर्दैछ!
अर्को जेनरेसन कैसीनो खेल नजिकको नजिक Cubee टेक्नोलोजी ठूलो बाटोहरूमा चल्दैछ र प्रत्येक वर्ष हामी स्मार्टफोन्स, ल्याप्टप र अन्य उपकरणहरूमा उत्कृष्ट सफलता देख्छौँ। तर यी प्रविधिमा मात्र प्रगति होइन। अनलाइन कैसीनो खेलहरु पनि विकसित गर्दै छन् र एक स्पष्ट उदाहरण को एक नयाँ स्लट मिसिन को रिलीज हो: क्यूबी! क्यूबी कुनै अन्य स्लॉट मिसिनको विपरीत हो - वास्तवमा, यो स्लट मिसिनलाई फोन गर्न गाह्रो छ! यसमा कुनै रिल्स छैन र यो एक पारंपरिक स्लॉट भन्दा बढी कम्प्यूटर गेम जस्तो खेलिन्छ। यो सबै भन्दा धेरै अनलाइन स्लट मिसिनहरु बाट टाढा हुन्छ। यो बाकस बाहिर सोच्ने समय हो, वा हामीले भनौं, क्यूब! नायक क्यूबे नामक एक फजी र आराध्य प्राणी हो। खेलको लक्ष्य दुश्मन पराजित गर्ने क्रममा जब3विभिन्न उमेरका माध्यमबाट यात्रा गर्दैछ: द पाषाण युग, द युरा पिरासी, द वाइकिंग आयु र अन्तमा क्यूब्यान्डमा परिणत हुन्छ - जहाँ बहु खेलहरूसँग खेल्ने नि: शुल्क खेलहरू! नयाँ शानदार क्यूबी यी विशेषताहरू छन्:
ऊर्जा बल: यो प्रतीक क्युबीको बल बढ्छ, र उसलाई अधिक शक्तिशाली शत्रुहरूलाई पराजित गर्न अनुमति दिन्छ र तपाईले धेरै खरिद भुक्तानी गर्नुहुन्छ।
Rocco: क्युबीको मुख्य शत्रु उहाँ प्रत्येक प्रकोपमा क्यूबीको विपरीत हुनुहुन्छ। जब खेल राउन्डमा हतियार देखा पर्दछ, यसले रोकोको स्ट्राइकलाई कम गर्न कोर्छ। एक पटक पराजित भएपछि, कोबे अर्को अग्लोमा जान्छ।
पिरिकाको युग: यस राउन्डमा देखापर्ने प्रत्येक तोप प्रतीकको लागि, नि: शुल्क खेल सूची संख्या एक बिन्दुले माथि जान्छ।
Tत्यो वाइकिंग युग: यस गोलोमा देखा पर्ने प्रत्येक बोको प्रतीकको लागि, गुणक संख्या एक बिन्दु द्वारा माथि जान्छ।
क्युबेल्यान्ड: पेयब्याक समय! संग्रहित गुणकसँग तपाईको संचित नि: शुल्क खेलहरू प्ले गर्नुहोस्!
एक साथ क्यूब प्ले गर्नुहोस् 150% मिलान + 50 नि: शुल्क स्पिनहरू माथि! छुटकारा
कोड: CUBEE150 प्रोमो को एक $ 25 मिनेट को आवश्यकता छ। जम्मा गर्नुहोस् र यसले 30x रोल माथि र अधिकतम नकद नगरेको छ। 1x साप्ताहिक रिडिम गर्नुहोस्।
स्लोटो पत्रिका 2019 अन्तहीन गर्मी भाग्य! ?
अनन्त गर्मीको मौसम!
यदि तपाईं जीतको बारेमा गम्भीर हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले आफ्नो हातहरू हाम्रो भर्खरको स्लोोटो म्यागजिन - समर संस्करणमा राख्नुपर्नेछ। यस त्रैमासिक प्रिन्ट म्यागजिनमा दर्जनौं नि: शुल्क कूपन र स्पिन पदोन्नतिहरू छन् जुन तपाईं अगस्तमा ढिलो सम्म स्पिनि re रिल राख्नुहुन्छ! विश्वव्यापी २०,००० भन्दा बढी सदस्यहरू सम्मिलित हुनुहोस् र खेलाडीहरूको मनपर्ने खेल पत्रिका पढ्नुहोस्! हाम्रो स्लोोटो म्यागजिन स्प्रिa२०१ 20,000 अझै पढिएको छ? यदि होईन भने, कृपया भ्रमण गर्नुहोस् यो लिंक र पढ्न रमाइलो!
ग्रीष्मकालीन 2019 पत्रिकाहरू विशेषताहरू: वर्धित प्रचार क्यालेन्डर प्रत्येक नयाँ स्लोटो पत्रिकामा हामी संसारमा सबै भन्दा प्रतिस्पर्धी र आक्रामक अनलाइन क्यासिनो प्रचार पैक! विशेष मिति र छुट्टीहरू राम्रोसँग २००% भन्दा बढि पदोन्नतिहरू र सयौं निःशुल्क स्पिनहरू पाउनेछन्! तपाइँको बैंकरोल विस्तार भएको हेर्न गर्मी भरि तिनीहरूलाई रिडिम गर्नुहोस्! नयाँ सेक्सन - नयाँ अनुभवहरू तपाईंको जीवनलाई अनुकूलन गर्न मद्दतको लागि हामीले पत्रिकामा नयाँ सेक्सनहरू विकास ग .्यौं। हामी चाइनिज राशि, प्रख्यात क्यासिनो स्क्यामरहरू, समय यात्रा र बहुमूल्य पत्थरहरूको मूल्य जस्ता रोचक विषयहरूमा पनि हेर्छौं! विशेष टूर्नामेन्ट हाम्रो विशेष गर्मी टूर्नामेन्टमा सामेल हुन पासवर्ड खोज्नुहोस् र हजारौं नगद पुरस्कार जित्न खेल्नुहोस्! पुरानो क्लासिक्स तपाईं अझै पनि हाम्रो पत्रिकामा केही क्लासिक सेक्सनहरू पाउनुहुन्छ जस्तै द लाइफ एण्ड एडभेन्चर्स ऑफ मिस्टर एंड मिसेज स्लोटो र "स्क्यान, रिडिम र विन सेक्सन"! गर्मी कहिल्यै राम्रो भएको छैन! एक रमाईलो गर्मी को लागी लगानी गर्न समय। स्लोोटो पत्रिकाको पदोन्नति को लागी तपाईं अन्य खिलाडीहरु भन्दा धेरै खेल्नुहुनेछ। अब युएसए क्यासिनो बोनस रिडिम गर्नुहोस् Sl deposit० जम्मा वा सो भन्दा बढि स्वचालित रूपमा हाम्रो स्लोोटो म्यागजिन समर संस्करणको सदस्यता लिने।
सब्सक्राइबर प्याक कुपन कोड
100% सजिलो-विन मिलान बोनस SUMMERMAG2019
$ 100 नि: शुल्क टिकट SUMMER2019
प्रमोशनहरू क्रममा रिडिम हुन आवश्यक छ! नक्कल कुपनलाई $ min० मिनेटको आवश्यक पर्दछ। निक्षेप र यसले २xx स्लटहरू वा केनो प्लेथ्रु र कुनै अधिकतम क्यासआउट समात्दैन। $ १०० ग्राहक टिकटले $ 35 अधिकतम क्यासआउट राख्दछ। वैध मे 25१ सम्म। गर्मी र शुभकामनाको आनन्द लिनुहोस्!
उच्च प्रभावकारी खेलाडीहरूको7आदतहरू
कैसीनो प्रेमीहरूको लागि सुझाव
रबर्ट Sanders द्वारा Sloto पत्रिका मा चित्रित रूपमा म क्यासिनोहरूमा जाँदैछु र दुई दशक भन्दा बढीको लागि अनलाइन क्यासिनोमा खेल्दै थिएँ। म सबै प्रकारका जुआहरूसँग सम्पर्कमा आएको छु। मैले उच्च स्ले जुआ संग पैसा स्लॉट्स aficionados र साझा एड्रेनालीन-पम्पिंग क्षण संग मनोरंजक रूपांतरण पाएको छु। केहि यो केवल समय गुजरने को लागि गर्छन, अन्य को रोमांच को लागि र केहि अन्य हो जसले यसलाई देखि जीवित गर्ने प्रयास गर्दछ। मैले यी सबै फरक मान्छेबाट धेरै पाठहरू बिर्सिएको छु जुन तपाईंलाई जिम्मेवारी र प्रभावकारी तरिकामा जुवाको आनन्द लिन अनुमति दिन्छ। म व्यक्तिगत रूपमा मनोरञ्जन मूल्यको लागि जुम चयन गर्दछु र लगातार मेरो दिमागमा उपस्थित रहन को लागी पनी को गर्मी मा बिल्टिंग द्वारा ओवरबोर्ड मा जाने छैन। हामी7बानीहरू हेर्नुहोस् जुन प्रभावी खेलाडीहरूद्वारा साझेदारी गरिएको छ विश्व भरि। यी बानीहरूको अभ्यास कैसीनोमा अभूतपूर्व सफलताको गारंटी छैन, तर जुआको हानिकारक पक्षहरूको जोखिम घटाउनेछ।
1) बजेट सेट गर्नुहोस् यो महत्त्वपूर्ण छैन यदि तपाईं रातो मुस्कानको लागि रातो उच्च रोलर खेल्नु भएको छ वा आइतबार जुआलरलाई एक मामूली खजानाको लागि केहि पेनी वेगर राख्नु हुन्छ। कुन कुराले एक सेट बजेटको साथ खेल खेल्ने सत्र सुरू गर्न हो। यो स्थानमा सेट गर्न कठिन आदत होइन। पहिला तपाईं आफ्नो आय हेर्नु पर्छ र सबै आवश्यक खर्च (भाडा, बंधक, उपयोगिता बिल, रौतहट, र यति गणना) गणना गर्नुहोस् र अवकाश गतिविधिहरू (चलचित्रहरू, गेमिङ, खाने वा शौकहरू) भनिन्छ के लागि बाँकीहरूलाई सेट गर्नुहोस्। म गेमिङमा तपाईंको अवकाश गतिविधि बजेटको 75% भन्दा बढी खर्च नगर्न सिफारिस गर्दछु। त्यसपछि निर्णय गर्नुहोस् कि तपाइँ एकल खेल सत्रमा वा धेरै दिन वा हप्तामा यो पैसा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने। यो आदतले तपाईंलाई स्लोटो' क्यास अनुभवको हरेक मिनेटको मनको शान्तिको साथमा पूर्णतया आनन्दित गर्न दिन्छ।
2) जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् तपाइँलाई अनलाइन क्यासिनोमा प्ले गर्न कसरी पत्ता लगाउन एक रकेट-वैज्ञानिक छ। तर तपाइँ अझै पनि क्यासिनो, यसको खेल र प्रमोशनको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ जसले तपाईंलाई राम्रो प्रदर्शन गर्न मद्दत गर्नेछ। अनलाइन गेममा अनुभव लामो समयमै भुक्तानी हुनेछ। खेलको आरटीपी (प्लेयरमा फर्किन्छन्) के बारेमा जान्नुहोस्, के कम र उच्च-भिन्नता खेलहरू छन्, र पदोन्नतिका विभिन्न सर्तहरू (अधिकतम नगद बाहिर, चिपचिपा / गैर-निकाल्ने बोनस, अधिकतम शर्त सीमा, प्रतिबन्धित खेल र यति ) प्लस कैसीनो को शर्तहरु (साप्ताहिक फिर्ता सीमाहरु, सुरक्षा दस्तावेज प्रक्रियाहरु)। जब तपाइँ आफ्नो गेम अनुभवको हरेक पक्षको बारेमा पूर्णतया सूचित हुनुहुन्छ भने, तपाईंले ठूलो अप्रिय आश्चर्यकलाप प्राप्त गर्नुहुने छैन जस्तो लाग्छ कि तपाईको विन्निहरु खाली छन् किनकि तपाईले एक स्लट्स-मात्र बोनससँग टेबल खेल खेल्नुभयो।
3) ढिलो बजाउनुहोस् क्यासिनो अनुभव मात्र एक द्रुत रकम बनाउने बारेमा मात्र होइन तर अप्टको रोलरोकोस्टर सवारी र भाग्यमा रमाइलो गर्न पनि। तथापि, अक्सर, यो हो कि हामी खेल को रोमांच मा व्यस्त छ कि हामी क्षणिक रूप देखि भूल जान्छ कि हामी वास्तव मा हाम्रो कडा अर्जित नगद संग खेल रहे हो। यसकारण, धेरै अनुभवी खेलाडीले ढिलो खेल्न सिकेका छन् त्यसैले उनीहरूको अर्को चालमा मनन गर्ने समय हुन सक्छ। यदि तपाईं कौशल-आधारित खेलहरू खेल्नुहुन्छ भने यो फरक छैन ब्लेक र भिडियो पोकर, वा केवल शुद्ध मौका जस्तै स्क्रैच कार्ड वा स्लॉट खेलहरू। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँसँग तपाइँको खेल सत्रमा पर्याप्त 'सोच अंतरालहरू' अर्को खेलमा सार्न विचार गर्न वा हामी अर्को खण्डमा हेर्नेछौँ, रमाईन्छौं।
4) थाहा छ जब कल गर्न छोड्छ यो आदतले व्यक्तिमा विकास गर्न समय लिन्छ र जब तपाइँ विजयी हुँदा एक सत्र अन्त्य गर्न जान्न महत्त्वपूर्ण छ र जब तपाइँ हराउनुहुन्छ। खेलहरूमा पैटर्नहरूमा ध्यान दिनुहोस् ताकि तपाईं यथार्थ गर्न सक्नुहुँदा यो यथार्थवादी हो कि खेलहरू अधिक तिर्न सक्दैनन्। यो आवश्यक छ जब तपाईं एक निर्णायक जीत प्राप्त गर्नुभएको छ। एक निश्चित बिन्दुको कारणले खेल खेल्दै तपाईंलाई कैसीनोको कफीमा पैसा फिर्ता गर्नेछ। त्यस्तै गरी, यदि तपाईंसँग छ हराएको तपाईंको सेट बजेट, गहिरो सासलाई ठुलो पार्नुहोस् र सत्र अन्त्य गर्न विचार गर्नुहोस् र अर्को दिन खेलौं जब तपाईंको भाग्य परिवर्तन हुन सक्छ। यदि तपाइँ थप हानिको खतरा घटाउनुहुन्छ र आफ्नो winnings लाई अधिकतम बनाउनु हुन्छ भने, तपाईंसँग भविष्यमा प्ले गर्न थप अवसरहरू छन्।
5) पूरा मूल्य पाउनुहोस् Sloto'Cash कैसीनो मा बजाउने धेरै पैसा छ र तपाईंले तिनीहरूलाई प्रत्येक को एक फाइदा लिन प्रयास गर्नुपर्छ। थप पुरस्कारहरू र क्यासब्याक बोनस प्राप्त गर्न वफादार क्लबमा सामेल हुनुहोस्। कुन गेमहरूले कम्पोटिङ्हरूको उच्चतम दर प्रदान गर्दछ र प्राय: तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ हाम्रो जाँच गर्नुहोस् दैनिक यूएसएस कैसीनो बोनस चार्ट, लबीमा साप्ताहिक न्यूजलेटरहरू र सन्देश केन्द्र पढ्नुहोस् जुन प्रायः प्रायः प्राय: स्पिन र ग्राहकहरूको लागि अन्य पुरस्कारहरू छन्।
)) आधारभूत रणनीतिहरू सिक्नुहोस् सबै खेलहरू प्रभावकारी रणनीतिहरू छैनन् तर त्यहाँ केही छन् जुन केही कौशल र रणनीतिहरू चाहिन्छ कि तपाइँ कम्तीमा कम्तीमा गृह किनारा कम गर्न सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ। मैले धेरै स्लट मेशिन रणनीतिहरूको बारेमा सुनेको छु तर सामान्यतया तिनीहरू इच्छाशील सोच भन्दा बढी छैनन्। तथापि, खेलहरू भिडियो पोकर र ब्ल्याक ज्याक मनपर्ने निश्चित नियमहरू छन् जुन तपाईंले पछ्याउन सक्नुहुनेछ कि गणित रूपमा सफलताका लागि तपाईंको मौका बढाउनेछ। भिडियो पोकरमा कुन कार्डहरू राख्नु र ब्ल्याकज्याकमा 'डबल' गर्दा कत्तिको प्रभावकारी हुन सक्छ तपाईंको जीत जित्ने को लागी बढाउन को लागी!
7) पिउन नबिर्सनुहोस् हामी सबै कैसीनो वेटरहरु द्वारा बिग्रेको छु जुन हामी हाम्रो चश्मे बियर र ककटेलहरु लाई पूर्ण बनाउछौं। तर यो क्यासिनो तालिका वा खेलमा तपाईंको सफलता बर्बाद गर्ने जोखिम छ। त्यहाँ कुनै गोपनीय कुरा छैन कि एक सुझाव दिमागले गलत निर्णयहरू गर्न सक्छ, र सबैलाई भन्दा खराब, तपाइँले यस लेखमा उल्लेख गर्नुभएको सबै उल्लिखित सुझावहरू र बानीहरू बिर्सने सम्भव छ! त्यसैले तपाईंले खेल्नुहुँदा पिउनदेखि टाढा जानुहोस्। यदि तपाइँ आरामको पेय संग मिलेको क्यासिनो उत्तेजनाको संयोजनको विरोध गर्न सक्नुहुन्न भने, हरेक 1.5 घडीमा एक बियर वा एक गिलास रक्सीको सेवन सीमित गर्नुहोस् र तपाईंको पहिलो पेय भन्दा पहिले तपाइँले गम्भीर भोजन पाउनुभयो।
क्यासिनो खेलहरूको छोटो इतिहास
भाग्य को मूल ट्रेस गर्दै धेरै परम्पराहरु र प्रथाहरु जस्तै मानवता को रूप मा पुराना हो जस्तै, मौका को खेल को उत्पत्ति पूर्व इतिहास को धुंध मा छिपे हुए छ। अर्थशास्त्री र इतिहासकारहरूले विश्वास गर्छन् कि एक फारम वा अर्को जुआ हजारौं वर्षको लागि अवस्थित छ। आज हामीले एक व्यापक, विश्वव्यापी रूपको मनोरञ्जन के मूलको लागि सुराग पत्ता लगाउन प्रारम्भिक सभ्यताको अभिलेखमा हेर्नुपर्छ। "हेड वा टेल" एक मौका खेलको सरल र प्रारम्भिक रूप हुन सक्छ। खेल हावा मा फेंकने एक साधारण सील संग खेलयो। रोमन साम्राज्यबाट रेकर्डहरू यो सिक्काको वास्तविक प्रयोग गर्नुअघि यो "सिक्का फ्लिङ" पुष्टि गर्दछ। साम्राज्य भित्र सिक्किमहरू सामान्य हुँदा, विवादको समाधान गर्न एक सिक्का टोगको लोकप्रिय तरिका बन्नुभयो। यसलाई "नेरिया ओटो क्याप्ट" भनिन्छ "अर्थ वा जहाज" को रूप मा धेरै सिक्का एक तरफ जहाज र अर्को मा सम्राट को प्रमुख थियो। पुरातन ग्रीसमा जुआ को अभ्यास उनको धेरै पौराणिक कथामा सम्मिलित थियो। यस्तो भनिन्छ कि Zeus, पोजिडीन र हुड्स पासा को खेल पछि ब्रह्मांड को बीच मा विभाजित भयो। जाइसले हेभेन जित्यो, समुद्र पोसिडोन गए र अन्डर वर्ल्डमा रहेको हड्सले जित्यो। यस सन्दर्भमा यो बुझ्न सजिलो छ किन पुरातन युनानीहरूले विश्वास गरे कि देवताहरूले पासाको खेलको नतिजा नियन्त्रण गरे। तिनीहरूले शासकहरू चयन गर्ने मौका पाएका थिए, ओमनको खोजी र भविष्यका घटनाहरूको भविष्यवाणी गर्थे।
के तपाईंलाई थाहा छ कि पुरातन युनानी पौराणिक कथाको अनुसार, ज्यूस र दुई अन्य देवताहरूले पासाको खेल पछि आफूलाई ब्रह्मामा विभाजित गरे?
पुरातनता मा मौका को सबै भन्दा विस्तृत खेल केनो हो, जसलाई पहिले नै 2500 को रूप मा शुरु भएको हो चीन। यो लटरी को प्रारम्भिक रूप हो, जहां सहभागिहरु 80 को सेट देखि केहि संख्याहरु को चयन गर्छन र संख्या को यादृच्छिक चयन को परिणाम को इंतजार गर्दछ। किंवदंती छ कि चीन को महान पर्खाल आंशिक रूप से केनो टिकट को बिक्री गरेर वित्त पोषित भएको थियो! जब हामी हाम्रो समय नजिक पुग्छौं, मौकाको थप खेलहरू देखा पर्न थाले। धेरै प्रोटोटाइपिक कैसीनो खेलहरु जस्तै ब्ल्याकजैक, रूले, क्रेप्स र Baccarat युरोपेली मध्य युगको समयमा या पछि उनको उत्पत्ति छ। क्रेप्स को खेल अंग्रेजी मूल को लागी मानिन्छ, 12 सदीमा शूरवीरों द्वारा विकसित समय को पारित गर्न को लागी। ब्ल्याक ज्याक को प्रारम्भिक संस्करण कोर्वेन्ट्स को प्रसिद्ध उपन्यास डन क्विक्सोट मा उल्लेख गरिएको छ।
कार्ड बजाउने पहिलो पानामा पसेको थियो तर पछि, मुद्रणको आविष्कार गरेपछि तिनीहरू मुद्रण घरहरूमा निर्मित थिए। दार्शनिक र वैज्ञानिक Blaise Pascal 17 शताब्दीमा रूले को एक आदिम रूप प्रस्तुत गरे। पछि 18 शताब्दीमा रुले र बाकार्कत दुवैको आफ्नो आधुनिक रूप लिन थाले। जुआको उद्देश्यको लागि स्थापनाको लागि क्यासिनो अस्पष्ट मूल छ। जुवा सधैं मनोरञ्जनको एक अत्यन्त लोकप्रिय रूप रहेको छ तर अहिले जस्तै, शासक र सरकारहरू अहिले जस्तै, यो दमन गर्न प्रयास गरेको छ। 1190 मा, तेस्रो क्रूड को समयमा, किंग रिचर्ड अफ इंग्लैंड र फ्रान्सको फिलिप द्वितीयले उक्त अधिनियम जारी गरे जुन नाइट को दर्जा भन्दा तलका लागि जुआ को बिरुद्ध मनाईयो।
यो केवल 1638 मा छ जुन हामी पहिलो कानूनी क्यासिनो युरोपमा देखा पर्दछौँ। इटालीमा "इल रिडोटो" वा "निजी रूम" को रूप मा जानिन्छ, यो वेनिस मा एक सरकारी स्वामित्वको जुआ घर थियो। यो केवल दुई प्रकार को खेलहरु लाई पेशकश दिईयो: बिरिबी र बसटा। पहिलो लटरी खेल थियो, जबकि पछि पोकर, जिन रैमी र कालीजैक बीचको मिश्रण थियो। युआन जुआ सेलूनहरू 19 सदीमा व्यापक थिए तर यो केवल 1931 मा थियो, जब नेवाडा जुआलाई वैधानिक बनाउन पहिलो राज्य बन्छ, कि वास्तविक क्यासिनोहरूले लास भेगासमा आफ्नो उपस्थिति बनाउनुभएको थियो।
दोस्रो जम जुआ हब अटलांटिक सिटी भयो जब न्यू जर्सीले जुआलाई 1977 मा वैध बनायो। आज त्यहाँ 21 राज्यहरू छन् जुन अमेरिकामा व्यावसायिक जुआ स्थापना गर्ने अनुमति दिन्छ। क्यासिनो खेलहरूको यस छोटो अवलोकनमा अन्तिम चरण अनलाइन संसारमा जुआको परिचय भएको छ। धेरै पहिलो अनलाइन क्यासिनो अगस्त 1995 मा सुरु भएको थियो, आजको अनलाइन खेलहरूको तुलनामा धेरै खराब गुणस्तरको मात्र 18 खेलहरू प्रदान गर्दछ। फास्ट अग्रेषण केवल 20 वर्ष र इन्टरनेट अब हालै 1,500 जुआ साइटहरू मा एक हालको अर्थशास्त्री। लेख लेखिएको छ।
मौकाको खेलहरू भविष्य के हुन सक्छ? हामीले यस ग्रीष्मकालीन संस्करणमा देखेका छौं आगमन को 3D स्लट खेलहरु को गुणवत्ता र मनोरंजन को एक नयाँ मानक सेट। हामी 3D को नयाँ रिलीज धेरै नजिक पुग्न र नजिकैको भविष्यमा मोबाइल खेल हेर्न सक्दछौं जब हामी उमेर पुरानो जुवा प्रथाको अर्को चरणको आकारमा सुरू गर्छौँ।
अनलाइन क्यासिनो बोनसका लागि विस्तृत गाईड?
स्लोटो म्यागजिनमा चित्रित भएको रूपमा हामी Sloto'Cash क्यासिनो भ्रमण गर्दा हामी लामो घण्टा खेल्न चाहन्छ भन्ने तथ्यलाई कुनै अपहरण छैन। जीतको सम्भावना बढाउनको लागि, ठूलो ब्यालेन्सको साथ सुरू गर्नाले सबै भिन्नता हुन्छ। तसर्थ, हामी मध्ये धेरैले एक संयुक्त राज्य अमेरिका क्यासिनो बोनस लिन को लागी हाम्रो निक्षेप लिन। अतिरिक्त यूएसए क्यासिनो बोनस नगदले हामीलाई स्लट मेसिनहरू कडा भएको बेला क्षणहरू खेल्न अनुमति दिन्छ। तर संयुक्त राज्य अमेरिका क्यासिनो बोनस लिन सधैं बुद्धिमानी कदम छैन; विशेष गरी यदि तपाइँ टेबल खेलहरू र प्रगतिशीलहरू सहित खेलहरूको सम्पूर्ण दायरा प्ले गर्न चाहनुहुन्छ भने वा यदि तपाइँ द्रुत रूपमा क्यास आउट गर्न चाहानुहुन्छ भने। यस लेखमा (क्लिक गर्नुहोस् यहाँ भिडियो लेखका लागि) हामी सबै विभिन्न परिस्थितिहरू र सर्तहरू साथै कैसीनो प्रचारहरूको प्रकारहरू हेर्नेछौं। यस युनिभर्सिटीको साथमा युएसएस क्यासिनो बोनस दावी गर्दा तपाइँलाई अझ विश्वस्त रहनेछ र अन्ततः तपाइँलाई हाम्रा खेलहरूमा परिणाम अनुकूलन गर्न सक्षम बनाउनेछ। ज्ञान संग शक्ति को नियंत्रण मा आउँछ र तपाईं आफ्नो वांछित परिणाम को लागि सर्वश्रेष्ठ फिटिंग यूएसएस कैसीनो बोनस को चयन को लागि स्वतंत्रता हुनेछ।
आधारभूत पदोन्नति प्रकारहरू: अप्रेन्ट र क्यासब्याक सबै प्रमोशनहरूको 90% अपफ्रेन्ट बोनसहरू हो जुन अमेरिकाको क्यासिनो बोनस पैसा तिर्नु अघि वा डिप्रेसन बिना। बोनस जुन डिपेसनको साथमा जानुहुन्छ विभिन्न नामहरू छन् जस्तै:
बोनस मिलाउनुहोस्: एक संयुक्त राज्य क्यासिनो बोनस बराबर वा १००% भन्दा बढी तपाईंको निक्षेप। क्यासिनो खेलाडीको निक्षेप 'मेल खान्छ' ताकि उनीहरूले कम्तिमा पनि जम्मा राशिको साथ खेल्न सक्छन्। उदाहरणको लागि, यदि तपाईंलाई १००% प्रस्ताव गरिएको छ र १०० डलर जम्मा गरियो भने, क्यासिनोले तपाईंलाई २०० अमेरिकी डलरमा खेल्न सुरु गर्न युएसए क्यासिनो बोनस पैसामा १०० डलर दिन्छ। यी प्राय: खेलाडीको प्रारम्भिक जम्मा (हरू) को लागि बोनस ब्यक्तिको रूपमा उपलब्ध छन्।
पुन: लोड वा प्रतिशत बोनस: अवस्थित ग्राहकहरूको लागि उपलब्ध बोनसहरू जुन हरेक जम्मा गरेपछि उनीहरूको ब्यालेन्स बढावा गर्न आवश्यक पर्दछ। रिलोडहरू प्राय: खेलाडी जम्माको १००% मुनि हुन्छन्, तर अवसरहरूमा रिलोड शब्द मिलान बोनसको साथ आदानप्रदान हुन्छ, त्यसैले प्रतिशत १००% मार्क पार गर्न सक्दछ।
निश्चित राशि बोनस: यी बोनसहरूको साथ तपाईले सटीक संयुक्त राज्य अमेरिका क्यासिनो बोनस निर्दिष्ट गर्नुहुनेछ तपाईंले सटीक जम्मा राशिसँग प्राप्त गर्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी, क्यासिनो एक $ 50 जम्मा मा एक USA 25 यूएसए क्यासिनो बोनस प्रदान गर्दछ। यो 200% जम्मा रकम प्रतिनिधित्व गर्दछ। नोट गर्नुहोस् कि निश्चित रकममा अधिक जम्मा गर्दा क्यासिनो बोनस अमेरिका क्यासिनो बोनस बढ्दैन। माथिको केसमा, यदि तपाईं $ 50 जम्मा गर्नुहुन्छ भने तपाईं अझै पनी $ 50 बोनस पाउनुहुनेछ। जब तपाइँलाई एक अग्रिम पदोन्नती प्राप्त गर्न निक्षेपको आवश्यकता पर्दैन, बोनस धेरै प्रकारका हुन्छन्:
कुनै जम्मा बोनस छैन: यो धेरै लोकप्रिय छन् र धेरै खेलाडीहरू उनीसँग परिचित छन्। उनीहरूलाई पनि निक्षेप टङ्कहरू, चिप्स वा नगद पुरस्कार पनि भनिन्छ। कुपन कोड कूपन कोड रिडिम गरेपछि युएसएस क्यासिनो बोनस नकदमा पूर्वनिर्धारित राशि प्राप्त गर्दछ। यो प्रकारका प्रमोशनहरू सामान्यतया जब तपाई क्यासिनोमा साइन अप गर्नुहुन्छ र प्राय: प्रायः अनुमति दिईन्छ: साइन अप वा नि: शुल्क परीक्षण निक्षेप रकम बोनस। तपाईं कैसीनो को तपाईंको वफादारी को लागि पनि पुरस्कार को रूप मा प्राप्त गर्नुहोस। यी पदोन्नतिहरूको साथ तपाई प्रायः खेलहरूको उत्कृष्ट विविधता खेल्न सक्षम छन् जस्तै सबै स्लॉटहरू, केनो र खरिद कार्डहरू।
फ्री Spins: जब तपाईले निःशुल्क स्पिन्स पाउनुहुन्छ, प्राय: स्पिनहरू एक खेलमा सीमित छन्। तपाइँ खेलमा प्ले गर्नको लागि परिमिति स्पिनहरू प्रदान गर्नुभएको छ। तपाईले केही निश्चित अवस्था पूरा गरे पछि स्पिनबाट विनिहरु राख्न अनुमति दिइन्छ। नि: शुल्क स्पिनहरू डिप्लुड बिना डिप्लोमा प्रदान गर्न सकिन्छ, तर तिनीहरू पनि प्रतिशत बोनससँग संयोजनमा प्रयोग हुन्छन्। केसिनो तपाईले युएसएस क्यासिनो बोनस र तपाईंको जम्मा गरेको प्लेलिस्ट गर्नु भन्दा धेरै नि: शुल्क स्पिन दिन्छ। यदि तपाईं आफ्नो डिपोरेसनसँग अपरेस्ट संयुक्त क्यासिनो बोनसस प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने, प्रायः तपाईंको क्यासिनोमा प्ले खेल समाप्त भएपछि युएसएस क्यासिनो बोनस नकद प्राप्त गर्नको लागी सम्भव छ।
नगद फिर्ता: यस पदोन्नतिको साथ तपाइँले तपाइँको निक्षेपको एक प्रतिशत फिर्ता पाउनुहुनेछ, यदि तपाइँ जम्माको साथ जित्न गर्नुहुन्न भने। जबकि प्रतिशत एक खेल वा रीलोड बोनस भन्दा सामान्यतया कम हो, उल्टो छ कि सर्तहरू एक अगाडि बोनस भन्दा leaner हो। यो स्लट भन्दा बढी खेल को मजा लिनेहरूको लागि यो उत्तम विकल्प हो, स्लोटो'क्याल्डमा क्यासब्याक प्रस्तावहरूले तपाईंलाई टेबल गेमहरू र भिडियो पोकर पनि खेल्न अनुमति दिन्छ।
क्यासिनो प्रमोशनले व्याख्या गरेका थिए Playthrough: क्यासिनोले आफैलाई बचाउनु पर्छ त्यसैले खेलाडीहरूले सबै प्रमोशन पैसा अहिले नै नक्कल गर्दैनन्। त्यसकारण, सबै बोनसहरूले ब्याजिंग आवश्यकता बोक्दछ जुन प्लेथ्रु वा टर्नओभरको रूपमा पनि चिनिन्छ। प्लेथ्रु अवस्थाले माग गर्दछ कि तपाईं 'जोखिम' लिनुहोस् वा खेलमा निश्चित पैसाको लागि पैसा उठाउनु अघि यो नगद दिनु अघि। अवस्था गुणकको रूपमा व्यक्त गरिएको छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं २xx प्लेथ्रु (जम्मा + बोनस) र १०० डलर जम्मा गरेमा १००% युएसए क्यासिनो बोनस प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाईं २०० $ सँग खेल्न थाल्नुहुनेछ। यो रकम (२००)) लाई २x गुणा गुणा गर्नुपर्नेछ। यो कुल $ 100 हो कि तपाइँ पदोन्नति बाट तपाइँको जीत फिर्ता लिन सक्नु अघि अनुमति प्राप्त खेलहरूमा बजारको रूपमा राख्नु पर्छ।
स्टिकी बोनस: सँधै जाँच गर्नुहोस् कि यदि तपाईं प्लेसथ्रुसँग समाप्त गरे पछि तपाईं युएसए क्यासिनो बोनस राख्न सक्नुहुन्छ। यदि एक यूएसए क्यासिनो बोनस 'टाँसिने' हो भने यसको अर्थ यूएसए क्यासिनो बोनस रकम प्लेथ्रु पूरा गरेपछि घटाइनेछ। माथि उल्लेखित उदाहरण अनुसरण गर्दै, यदि तपाईं पदोन्नति समाप्त गर्दा $ 700 छ भने, यूएसए क्यासिनो बोनस रकम ($ १००) घटाइनेछ र तपाईं समग्रमा $ $०० नगदी सक्नुहुनेछ। राम्रो कुरा के हो भने Sloto'Cash सँग कहिल्यै स्टिकी बोनस हुँदैन, त्यसैले तपाईं जहिले पनि आफ्नो यूएसए क्यासिनो बोनसलाई आफ्नो जीतसँग नगद सक्नुहुन्छ!
अधिकतम नगद आउट सीमा: केहि प्रमोशनहरूमा क्यासिनोले पदोन्नतिबाट अधिकतम सम्भावित विनिङ्कनलाई सीमित गर्न सक्छ। यो धेरै नि: शुल्क स्पिन पदोन्नतिहरूको लागि एक मानक अवस्था हो। उदाहरणका लागि, नि: शुल्क स्पिन पदोन्नतिले अधिकतम $ 500 को लागि सीमा सीमित गर्न सक्छ। यदि तपाइँ एक विशेष खेलमा 100 नि: शुल्क स्पिनहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ र तपाईंले पदोन्नतिको अन्त्यमा $ 1000 जित्नुहुन्छ भने प्रणालीले तपाईको ब्यालेन्सबाट $ 500 हटाउनेछ र तपाइँ बाँकी रकम नगद गर्न सक्नुहुन्छ। केहि प्रतिशत बोनसले अधिकतम नगद बाहिर सीमा हुन सक्छ र यी गुणकको रूपमा व्यक्त गरिनेछ। 100% यूएसएस क्यासिनो बोनसको अधिकतम 20x को बोनसबाट बाहिर निस्कने बेलामा, एक $ 100 यूएसएस क्यासिनो बोनस दिइएको छ कि तपाईंलाई त्यो विशेष पदोन्नतिबाट अधिकतम $ 2,000 हटाउन अनुमति दिन्छ। Sloto'Cash जमा निक्षेप बोनस मा अधिकतम नगद बाहिर सीमा थप्न अस्वीकार गर्दछ, त्यसैले तपाईं आफ्नो बोनस निक्षेपहरु बाट जित्न को लागी धेरै बाहिर नगद स्वागत छ!
खेल प्रतिबन्धहरू: प्रत्येक पदोन्नतिले संयुक्त राज्य क्यासिनो बोनस पैसाको साथ खेल खेल्न सकिन्छ जुन प्रतिबन्धहरू हुन सक्छ। यो सबै आवश्यक पदोन्नति र प्रतिबन्धित खेलहरूको लागि जुन तपाइँले खेल्न को लागी कैशियरमा जाँच गर्न महत्त्वपूर्ण छ। अधिकांश पदोन्नतिहरू स्लटहरू अभिमुख हुन्छन् भने यदि तपाइँ टेबल गेन्टर खेलाडी हुनुहुन्छ, त्यसपछि तिनीहरूका लागि हेर्छन् जसले तपाइँलाई खेल्ने खेलहरूमा मनन गर्न अनुमति दिन्छ।
सिफारिस गरिएका प्रचारहरू: Sloto'Cash सँग एक प्रेरणादायक USA क्यासिनो बोनस संग्रह छ जुन कुनै पनि प्रकारका खेलाडीहरूलाई सन्तुष्ट पार्दछ। तिनीहरू हप्तामा र हप्ता बाहिर पदोन्नति प्रस्ताव गर्दछ जुन तपाईंको मनपर्ने खेल (हरू) मा प्ले गर्न सकिन्छ, टेबल खेलहरू, प्रगतिशीलहरू र भिडियो पोकर सहित। ठूलोमा पैसा कमाउने राम्रो अवसर कहिल्यै नछुटाउनुहोस्: निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले साप्ताहिक न्यूजलेटर, लबीमा सन्देश केन्द्र र अद्वितीय पदोन्नतिको लागि क्यासियर जाँच गर्नुभयो। अन्तमा, Sloto'Cash मा दुई सबैभन्दा लोकप्रिय प्रमोशनहरू हेर्नुहोस् जुन दर्जनौं खेलाडीहरू हरेक हप्ता ठूलो जित्न मद्दत गर्दैछ:
कुपन: SLOTO77WEEKEND हप्ताको अन्तमा स्लोोटो' क्यास क्यासिनोमा ब्याANGगसँग सुरु हुन्छ! खेलाडीहरूले एक 77$% संयुक्त राज्य अमेरिका क्यासिनो बोनस दिनको दुई पटक सप्ताहन्त र सोमबार दुई depos $ $ वा अधिकको जम्मामा प्राप्त गर्दछन्। तर तपाईं एक मौसमी खेलमा F 35 नि: शुल्क स्पिनहरूको साथ प्रत्येक पदोन्नति शुरू गर्नुहुन्छ! तपाईं the 77 स्पिनको साथ राम्रो जीत हासिल गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि तपाईं आफ्नो जम्मा 77 77% बोनससँग खेल्न सक्नुहुनेछ। कति:%%% सम्म $ 77 उपलब्धता: प्रति दिन २x (शुक्रबारदेखि सोमबार) खेल अनुमति: स्लट, केनो र स्क्र्याच कार्ड प्लेथ्रु: x०x (जम्मा + बोनस) स्लट, केनो र स्क्र्याच कार्डहरूमा अतिरिक्त पुरस्कार:
77 नि: शुल्क स्पिनहरू सिजनको हाइलाइट गरिएको खेलमा पदोन्नति: क्यासब्याक
हाम्रो क्यासब्याक प्रमोशनहरू उनीहरूको लागि महान हो जुन टेबल र प्रगतिशील ज्याकपोट खेलहरू सहित हाम्रा कुनै पनि खेलहरूमा उनीहरूको निक्षेपसँग स्वतन्त्र रूपमा खेल्न चाहन्छ। यदि तपाइँ तपाइँको निक्षेप bust तपाईं आफ्नो जम्मा मा एक कैशब्याक दावी गर्न हाम्रो लाइभ कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, क्यासब्याक यूएसए क्यासिनो बोनसले तपाईंलाई धेरै टेबल गेमहरू र भिडियो पोकरहरू प्रतिबन्धित खेलहरूको एक सीमित सेटको साथ खेल्न अनुमति दिन्छ। यो ठूलो प्लेथ्रु आवश्यकताहरू जोगिन चाहनेहरूको लागि यो एक उत्तम विकल्प हो किनकि क्यासब्याकमा न्यूनतम १०x प्लेथ्रु छ। यी सबै शीर्षमा, क्यासब्याक प्रतिशत हप्ताको अन्तमा बढ्छ! कति: हप्ताका दिनमा २%%, सप्ताहन्तमा% 10% उपलब्धता: असीमित (सबै निक्षेपहरूको लागि) खेल अनुमति: क्यारेबियन ड्र / होल्डम / स्टड पोकर बाहेक सबै खेलहरू, मलाई सवारी गरौं, रूलेट मल्टीप्लेयर र प्रगतिशील स्लॉट। Playthrough: स्लॉट, केनो र स्क्रैच कार्डहरूमा 10x (बोनस), अन्य खेलहरू कृपया क्यासियर सर्तहरू जाँच्नुहोस्।
हाम्रो हप्तामा अमेरिका क्यासिनो बोनस CHART हेर्नुहोस्
अधिक स्लोटो क्यास अमेरिका क्यासिनो बोनस >>
स्लोटोकस युएसएमा कुनै जम्मा बोनस कोड 2020 छैन अपडेट गरिएको: जनवरी 10, 2020 लेखक: Damon
1 एन्चेन्टेड गार्डन II? ️?
2 संयुक्त राज्य अमेरिका क्यासिनो बोनस सुविधाहरू प्रेमीहरूका लागि: FUCANGLONG ?!
3 ईश्वरको नि: शुल्क दान देवताहरू!
4 यस जूनमा स्लोटोको उच्चतम यूएसए क्यासिनो बोनस पोइन्टमा पुग्नुहोस्!
5 स्वागत छ मे? भाग्यशाली धूप र जीत संग!
6 ड्रीम टाइम टाइम यात्रा ⏳
7 स्लोटो पत्रिका 2019 अन्तहीन गर्मी भाग्य! ?
8 उच्च प्रभावकारी खेलाडीहरूको7आदतहरू
9 क्यासिनो खेलहरूको छोटो इतिहास
10 अनलाइन क्यासिनो बोनसका लागि विस्तृत गाईड?
10.1 अधिक स्लोटो क्यास अमेरिका क्यासिनो बोनस >>
स्लोटोक्याश संयुक्त राज्य अमेरिका कुनै जम्मा छैन ...